Lixdaan Qaabood Ku Jar xiriirka Nin ama Naag aad horey u kala tagteen | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Lixdaan Qaabood Ku Jar xiriirka Nin ama Naag aad horey u kala tagteen
Waadka gudbi kartaa culeyska uu kugu haayo nin ama naag aad horey u kala tagteen isal markaana horey kaaga socday iyagaba oo xiriir kale galay adigoo shalaaynaya oo wali rajeynaya inaad la wadajir ahaataan.
Tilmaamahan waxay kaa caawin doonaan inaad ka gudubtid oo niyadda aad ka saartid qofkaas
Maskaxdaada ka saar xiriirkii hore iyo waxyaabaha ku saabsan
Mskaxdaada kaalin wanaagsan ayay ka qaadaneysaa marka aad bilaawdid ka fekeritaanka xiriirkaagii hore, waxaad arkeysaa oo kaliya waxyaabihii wanaagsanaa iyo sida ay u wanaagsanayd wadajirkiinii, maskaxdaada waxay ku dareensiineysaa inaad dambi gashay, waxaad rumeysaneysaa in guul darada ku dhacday xiriirkaas aad qaladkiisa lahayd adiga.
Si aad horey ugu socotid, ka saar maskaxdaada xiriirkaas, waxaa shaki la’aan ah inaad illaawi doontid.
Iska nadiifi wax kasta oo ku xasuusinaya ninkaagii ama xaaskaagii hore
Sawiradii hore ee aad wada gasheen, sawirka saaxiibtaa hore ama saaxiibkaa hore, hadiyad ama wax kasta oo aad ka qaadatay iska fogeey.
Saaxiib hala noqon
Haddii aad daacad u noqoneysid naftaada waxaad ogaan doontaa inaadan saaxiib lasii ahaan Karin ninkaagii ama xaaskaagii hore ama saaxiibtaa, hala noqon saaxiib horeyna uga soco.
Tir tir xiriirka saaxiibkaa hore ama nambaradiisa
Tir tir nambar walba oo aad ka heysid saaxiibkaa ama saaxiibtaa hore eek u jira taleefankaaga una tir qaab aadan mar dambi kula xiriiri Karin ama nambarkiisa aadan heli Karin taasi micnaheeda waxa uu yahay tir tir dhammaan meel walba oo aad ku xiriirteen farriin ha noqoto ama wax kale sida baraha bulshada, waana sidaas qaabka aad ku joojineysid xiriirkiisa.
Ka feker Mustaqbalkaaga
Diiradda saar mustaqbalkaaga, haddii aad waqti ku bixisid ka fekeritaanka mustaqbalkaaga iyo sida wanaagsan ee aad noloshaada u maareyn lahayd, waqti uma heli doontid ka fekeritaanka saaxiibkaa ama xaabiibtaa hore.
Waqti la qaado dadka ku jecel
Waqti la qaado dadka ku jecel oo iyaga waqtigaaga ku lumi kuwaas ayaa ka fekeraya wanaagaaga inta aad ka walwali lahayd qof horey kaaga socday, isdareensii galacaltooyada nafiifka ah ee ay kuu qabaan qoyskaaga iyo saaxiibada kujecel waxaadna fahmi doontaa inay wanaagsantahay la jooga dadka ku jecel.
Wicitaanka nin ama naag kaa dhaqaaqay waa qaladka ugu weyn ee aad sameyneysid, naftaada oo kaliya ayaad dhaawaceysaa isal markaana murugo iyo wal wal aan dhammaaneyn aad galineysaa.